रणवीरसँग छुट्टीमा निस्किइन् दीपिका, यहाँ मनाउदैछन् भ्यालेन्टाइन डे
२०७६ माघ २४ शुक्रबार, दीपिका आफैले विदेशमा छुट्टीमा गइरहेको बताएकी छन्। उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा रणवीर र उनको राहदानी देखाउँदै एक तस्वीर शेयर गरिन्। यस पछि, दीपिकाले क्याप्शनमा लेखिन् - 'म र उनी ... छुट्टि'। ... बाँकी अंश»
रजनीकांतको 'दरबार' करोडको घाटामा : वितरक भोक हडतालमा, निर्देशक अदालतमा
२०७६ माघ २४ शुक्रबार, रिपोर्टका अनुसार २०० करोडको बजेटमा बनेको रजनीकांतको दरबारले विश्वभर २५० करोड कमाएको छ। यसको बाबजुद पनि फिल्मले ७० करोडको घाटा बेहोर्नु परेको छ । फिल्मको बजेटको आधा रकम रजनीकांतको फीस थियो। ... बाँकी अंश»
कोहलीको ब्राण्ड भ्यालु रोहित शर्माभन्दा दश गुणा बढी, अक्षय, सलमान र शाहरुख सबै पछि
२०७६ माघ २३ बिहिबार, चर्चित बलिउड जोडी रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण एकसाथ बलिउडमा राज गरिरहेका छन्। अभिनेतामा रणवीर र अभिनेत्रीमा दीपिका बलिउडका शीर्ष स्टारहरू हुन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको ब्रा‌ण्ड भ्यालु ९३.५ मिलियन अमेरीकी डलर छ । उनको १० अर्व ६७ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । ... बाँकी अंश»
भगत सिंहको नाटकमा अंग्रेज सिपाही बन्दा १२ वर्षे पात्रको मृत्यु
२०७६ माघ २३ बिहिबार, १२ वर्षे छात्रको शहीद भगत सिंह नाटकमा अंग्रेज सिपाहीको भूमिका निभाउने क्रममा दुर्घटनावश फाँसी लगाएर मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
महानायकका सन्तान अभिषेकको दु:ख : जीवन बिमामा जागीर, करिश्मासँग सगाई टुटेपछि ऐश्वर्या
२०७६ माघ २२ बुधबार, सो समय अभिषेकले भनेका थिए, "जब एक अभिनेता फ्लप फिल्म दिन्छ भने मानिसहरूले उसको फोन उठाउन छाड्छन्। त्यसपछि उनीहरूले सोच्दैनन् कि तपाईं कसको छोरा र छोरी हुनुहुन्छ। फ्लप हुदाँ संसारकै सबैभन्दा खराब अनुभव हुन्छ जसले मानवतालाई असर गर्छ। यसले देखाउँदछ कि अभिषेक धेरै पटक यस्तो अनुभवबाट गुज्रिएका छन् । ... बाँकी अंश»
छोराले गर्लफ्रेन्ड घरमा लिएर आए करीनाले खेदाउने, तैमूरको धम्की- टाउको फुटाउनेछु
२०७६ माघ २२ बुधबार, यस अघि २०१९ मा, करीना अरबाज खानको शो पिन्चमा गएकी थिइन् । सो समय एक प्रशंसकले उनलाई यहि प्रश्न सोधेका थिए यसको जवाफमा, करीनाले भनेकी थिइन् - 'तपाईको बच्चालाई खुशी र सुरक्षित राख्नको कुनै मूल्य छैन।' ... बाँकी अंश»
छोरालाई लिएर सैफ करीनाका यस्ता चर्चा
२०७६ माघ २२ बुधबार, बलिउड अभिनेत्री करीना कपूर र अभिनेता सैफ अली खानका छोरा तैमूरको चर्चा प्राय छाइरहेको हुन्छ । ... बाँकी अंश»
नराम्ररी फसे शाहरुख खान, ७० करोडको सम्पत्ति जफत
२०७६ माघ २१ मंगलबार, २०१४ मा, ईडीले नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, यसको अध्यक्ष गौतम कुंडु लगायत अन्यबिरुद्द मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जसपछि उनीहरु २०१५ मा पक्राउ परे। कुंडुलाई पक्राउ गरिसकेपछि शाहरुख खानलाई आईपीएलमा फेमा उल्लंघनको बारेमा पनि प्रश्न गरिएको थियो। ... बाँकी अंश»
शाहरुख, सलमान डराएका अन्डरवर्ल्ड डनलाई प्रीति जिन्टाले दिइन् खुल्ला चुनौती
२०७६ माघ २० सोमबार, शाहरुख खान र फिल्महरू सम्बन्धित बलिउडका थुप्रै स्टारहरू सलमान खान, रानी मुखर्जीलाई समेत धम्की आइरहेको थियो । बलिउड कलाकारहरु पनि प्रहरीसँग अन्डरवर्ल्डबाट धम्की दिइरहेको गुनासो गर्न पुगेका थिए । तर जब उनीहरुलाई यहि कुरा अदालतमा राख्न प्रहरीले आग्रह गरे तब उनीहरु यसबाट हच्किए । ... बाँकी अंश»
कपडा ठिकसँग नलगाएको आरोप लागेकी शाहरुख पुत्री फेरी चर्चामा
२०७६ माघ २० सोमबार, सुहाना तस्वीरमा उनीको साथीसँग पार्टीमा देखिएकी छिन्। तस्विरमा सुहानाले निलो रंगको पोशाक लगाएका छन्। जसमा उनी एकदम हट देखिन्छिन्। सुहानाको सो तस्विर उनको फ्यान क्लबबाट इन्स्टाग्राम एकाउण्डमा शेयर गरिएको छ। उनको सो तस्वीर सोशल मिडियामा धेरै भाइरल भइरहेको छ। ... बाँकी अंश»
कस्तो छ ऋषि कपूरलाई ?
२०७६ माघ १९ आइतबार, ऋषि कपूर चाँडै दीपिका पादुकोणको साथ ठूलो पर्दामा देखा पर्नेछन्। केही दिन अघि यी दुबै स्टारले सोशल मीडियामा पोस्ट साझा गरेर यसको बारेमा जानकारी गराएका थिए । ... बाँकी अंश»
ऋषि कपूर अस्पताल भर्ना, रणबीर र आलिया सुटिङ छोडेर हिडे
२०७६ माघ १९ आइतबार, बलिउड अभिनेता ऋषि कपूर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । ऋषि कपूर दिल्लीको अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । केहि समय अघि ऋषि कपूर क्यान्सर जस्तो भयानक रोगसँग संघर्ष गर्दै थिए। जुन उपचारपछि उनी रोगबाट स्वस्थ भएर भारत फर्केका थिए। ... बाँकी अंश»
प्रिती जिन्टाको पीडादायी रह्यो बाल्यकाल, ३४ छोरी बसिरहेछन् ऋषिकेशमा
२०७६ माघ १७ शुक्रबार, मोडलिङ गरिसकेपछि प्रीति जिन्टाले केहि विज्ञापनमा काम गर्ने मौका पाइन् । यससँगै बिस्तारै उनको जीवन बलिउडतिर मोडिन थाल्यो। सो समयमा निर्देशक मणिरत्नम फिल्म 'दिल से' को लागि नयाँ अनुहार खोज्दै थिए। मुख्य भूमिका खेल्न शाहरुख खान र मनीषा कोइराला पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेका थिए तर सहयोगी चरित्र पनि आवश्यक पर्‍यो जसमा प्रिती जिन्टा छनौट भइन् । ... बाँकी अंश»
मलमुत्र भएको हिरासमा शाहरुखले बिताएको त्यो रात
२०७६ माघ १७ शुक्रबार, कुरा १९९३ को फिल्म 'माया मेमसाहब' हो । जसमा शाहरुखले फिल्म निर्देशककी श्रीमतीसँग एक प्रेम दृश्य बनाउनुपरेको थियो । ९० को दशकमा यस्ता सिमहरू एकदम बोल्ड मानिन्थ्यो। ... बाँकी अंश»
तापसी पन्नूलाई ‘थप्पड’ (भिडियोसहित)
२०७६ माघ १७ शुक्रबार, गालामा थप्पडको निशान देखाइएको छ । ... बाँकी अंश»
सन्नी लियोनीको सन्देश –‘स्मार्ट बन्नूस् सुरक्षित रहनूस्’
२०७६ माघ १७ शुक्रबार, उनले आफ्ना फ्यानसंग सेल्फी खिच्दा पनि मास्क लगाएकी छिन् । ... बाँकी अंश»
अमिताभदेखि शाहरुखसम्म कसले कति पढे ?
२०७६ माघ १७ शुक्रबार, काठमाडौं । भारतीय कलाकारहरुको विषयमा धेरैको मनमा एउटा प्रश्न उठ्नसक्छ– उनीहरुले कति पढेका होलान् ? यद्यपि केही भारतीय कलाकारहरुको पढाइ पनि निकै अब्बल छ । जसमध्ये केही कलाकारहरु यस्ता छन् – ... बाँकी अंश»
सनी लियोनी यसो भन्छिन् कोरोना भाइरसबारे
२०७६ माघ १७ शुक्रबार, उनले एक भिडियो सामाजिक संजालमा राखेसंगै उनी भाइरल भएकी छिन् । ... बाँकी अंश»
शाहरुखले दिए सम्पादक मार्ने धम्की, सुटिङका क्रममा प्रहरीले गर्‍यो पक्राउ
२०७६ माघ १५ बुधबार, यहाँ चाखलाग्दो कुरा के छ भने शाहरुखले ती प्रहरीहरू उनका प्रशंसकहरू भएको सम्झिए । उनीहरूसँग भेट्न चाहन्छन् र उनीसँग जाने निम्तो दिइरहेका छन्। तर पछि उनले पत्रिकाको सम्पादकको उजुरीमा उनलाई पक्राउ गर्न आएको बुझे। ... बाँकी अंश»
छोरालाई लिएर करीनामाथि सैफको गम्भिर आरोप
२०७६ माघ १४ मंगलबार, सैफ भन्छन् मलाई थाहा छैन तैमूरले यी सबै कुरा कहाँबाट सिकिरहेका छन् । ... बाँकी अंश»